प्रदेश सांसदले भ्याइदिए १ करोड ५५ लाख ! — Newskoseli
प्रदेश सांसदले भ्याइदिए १ करोड ५५ लाख !
पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाका लागि प्रदेश सांसदले वैशाख मसान्तसम्म १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । प्रदेशसभा गठन भएको मितिदेखि उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा वापतको रकम भुक्तानी गरिएको संसद् सचिवालयको लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ । प्रदेशसभा गठन भएको २०७४ माघ ५ देखि वैशाख ३१ सम्म गरी दुई पटक सेवा–सुविधाको रकम भुक्तानी भएको छ ।
सचिवालयका लेखा अधिकृत दुर्योधन गिरीका अनुसार माघदेखि चैतसम्मको पारिश्रमिक ६५ लाख ५६ हजार ५ सय ९४ र वैशाखसम्मको ८६ लाख ३३ हजार १ सय २ रुपैयाँ सांसदहरूको सेवा–सुविधामा खर्च भएको छ । यसमा वैशाख महिनामा सांसदले पाउने पारिश्रमिक पनि समावेश गरिएको छ ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाको टुंगो लागेको थियो । सोही अनुरूप नै सांसदहरूको पारिश्रमिकको रकम भुक्तानी गरिएको जानकारी गिरीले दिए ।
तर, प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई भुक्तानी गरिएको रकम भने फरक–फरक रहेको छ । प्रदेशसभाको सपथ खाएको मितिले भुक्तानी दिइने भए तापनि कूल ५९ सदस्यहरुमध्ये सरकारका ७ जना मन्त्रीहले प्रदेशसभा सदस्य रहँदाका दिनसम्मको मात्र पारिश्रमिक पाएकाे खबर साेमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।